September 2021 – Shwe Myanmar
“မညျးညဈနတေဲ့ ခြိုငျးကွားအသားအရကေို ပွနျလညျဖွူဝငျးလာစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျးမြား”
ချိုင်းအသားအရေ မည်းညစ်တယ် ဆိုတာဟာ ပေါ့သေးသေးထားရမယ့် ကိစ္စတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။
အသားအရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို မကြာခဏ ဖြစ်လာစေနိုင်ပြီး
အသားအရေကိုလည်း မည်းညစ်ညစ်နဲ့ ထူထူကြီးဖြစ်စေလို့ လူအများအမြင်မှာ အင်မတန် အကျည်းတန် စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကလက်ပြတ်လေးတွေ ညဝတ်ပြီးတော့ လှလှပပ သွားလာချင်ပေမယ့်လည်း
ဒီလိုမျိုးချိုင်းကြား အသားအရေကြောင့် ဘယ်မှမသွားရဲ၊ ဘာမှမဝတ်ရဲ ဖြစ်နေ ရပြီပေါ့။
ဒါဆိုရင် ဒီလိုပြဿနာဆိုးကြီးကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ မရှိတော့ဘူးလားလို့ မေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့
အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိတာပေါ့ ဆိုပြီး ပြန်ဖြေပေးချင်ပါတယ်။
ပန်းသီးရှာလကာရည်ကို မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်ရောစပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အမြုပ်လေးတွေထလာပါလိမ့်မယ်။
အမြုပ်လေးတွေ တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားသည့်အခါ ရလာတဲ့အနှစ်ကို ချိုင်းကြားအသားအရေမှာလိမ်းပေးလိုက်ကာ ခြောက်အောင်ထားပါ။
ခြောက်ပြီးလို့မိနစ်အနည်းငယ်ထပ်မံထားရှိပြီးရင် ရေအေးအေးကနဲ့ ဆေးကြောကာ အဝတ်နဲ့ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။
ခြောက်အောင်ထားပေးပြီး ရေနဲ့သန့်စင်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်လျှင် ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အကုန်လုံးကိုသေချာရောစပ်၍ ချိုင်းကြားအသားအရေမှာ ၂ မိနစ်လောက် ချေးချွတ်ပေးကာ ၅ မိနစ်ထားပေးပါ။
အချိန်ပြည့်ပါက ကြက်သီးနွေးထရုံရေဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ တဘက်လေးနဲ့ ခြောက်အောင်သုတ်ပေးလိုက်ပါ။
အာလူးအလုံးသေးလေးတစ်လုံးကို အခွံခွာ၍ ကြိတ်လိုက်ပါ။
၁၅ မိနစ်ထားပေး၍ ရေအေးအေးနဲ့သန့်စင်ပေးပါ။
ခြိုငျးအသားအရေ မညျးညဈတယျ ဆိုတာဟာ ပေါ့သေးသေးထားရမယျ့ ကိစ်စတဈခု မဟုတျပါဘူး။
အသားအရနေဲ့ပတျသကျတဲ့ ပွဿနာတှကေို မကွာခဏ ဖွဈလာစနေိုငျပွီး
အသားအရကေိုလညျး မညျးညဈညဈနဲ့ ထူထူကွီးဖွဈစလေို့ လူအမြားအမွငျမှာ အငျမတနျ အကညျြးတနျ စနေိုငျပါတယျ။
ကိုယျကလကျပွတျလေးတှေ ညဝတျပွီးတော့ လှလှပပ သှားလာခငျြပမေယျ့လညျး
ဒီလိုမြိုးခြိုငျးကွား အသားအရကွေောငျ့ ဘယျမှမသှားရဲ၊ ဘာမှမဝတျရဲ ဖွဈနေ ရပွီပေါ့။
ဒါဆိုရငျ ဒီလိုပွဿနာဆိုးကွီးကို ဖွရှေငျးဖို့ အတှကျ နညျးလမျးကောငျးလေးတှေ မရှိတော့ဘူးလားလို့ မေးလာခဲ့မယျဆိုရငျတော့
အလှယျတကူပွုလုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိတာပေါ့ ဆိုပွီး ပွနျဖွပေေးခငျြပါတယျ။
ပနျးသီးရှာလကာရညျကို မုနျ့ဖုတျဆိုဒါနှငျ့ရောစပျပေးမယျဆိုရငျ အမွုပျလေးတှထေလာပါလိမျ့မယျ။
အမွုပျလေးတှေ တဖွညျးဖွညျးပြောကျသှားသညျ့အခါ ရလာတဲ့အနှဈကို ခြိုငျးကွားအသားအရမှောလိမျးပေးလိုကျကာ ခွောကျအောငျထားပါ။
ခွောကျပွီးလို့မိနဈအနညျးငယျထပျမံထားရှိပွီးရငျ ရအေေးအေးကနဲ့ ဆေးကွောကာ အဝတျနဲ့ခွောကျအောငျသုတျပါ။
ခွောကျအောငျထားပေးပွီး ရနေဲ့သနျ့စငျပေးလိုကျပါ။ တဈပတျလြှငျ ၃ ကွိမျပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
အကုနျလုံးကိုသခြောရောစပျ၍ ခြိုငျးကွားအသားအရမှော ၂ မိနဈလောကျ ခြေးခြှတျပေးကာ ၅ မိနဈထားပေးပါ။
အခြိနျပွညျ့ပါက ကွကျသီးနှေးထရုံရဖွေငျ့ ဆေးကွောသနျ့စငျနိုငျပါတယျ။
ပွီးရငျတော့ တဘကျလေးနဲ့ ခွောကျအောငျသုတျပေးလိုကျပါ။
အာလူးအလုံးသေးလေးတဈလုံးကို အခှံခှာ၍ ကွိတျလိုကျပါ။
၁၅ မိနဈထားပေး၍ ရအေေးအေးနဲ့သနျ့စငျပေးပါ။
“ဆံပငျကို သဘာဝအတိုငျး ဖွောငျ့စငျးစမေယျ့ ပေါငျးတငျနညျး”
ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်း ဖြောင့်စင်းစေမယ့် ပေါင်းတင်နည်း …
သဘာဝအတိုင်း ဆံပင် ဖြောင့်စင်းစင်းလေးကို မကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေး ဘယ်မှာရှိမှာလဲ၊
ဒါ့ကြောင့်လဲ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ ဆံပင်ဖြောင့်တာ ခေတ်စားတာပေါ့နော်။
ဆံပင် ဖြောင့်ဖို့အတွက် ဓါတုပစ္စည်တွေ သုံးတာဟာ ဆံသားကို ပျက်ဆီးစေပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် သဘာဝနည်းလမ်း တစ်ခုကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ငှက်ပျောသီးမှည့် (၂) လုံး
ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း (၂) ဇွန်း
ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင်ဇွန်း (၂) ဇွန်း
သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း (၂) ဇွန်း
ကြက်ဥအကာ (၁) လုံး
ငှက်ပျောသီးကို အခွံနွှာပြီး ပြဲသွားအောင် ဖိလိုက်ပါ။ ကြိတ်လိုက်လို့လည်း ရပါတယ်။
ပြီးရင် ပျားရည် ဒိန်ချဉ်နဲ့ သံလွင်ဆီထည့်ပါ။
ပြီးရင် ကြက်ဥအကာ ထည့်ပါ။ သေချာ မွှေပေးပါ။ နှံ့သွားပြီဆိုရင် အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ ။
ဆံပင်အဖျားကနေ အရင်းထိ သေချာလိမ်းပေးပြီး Shower Cap (သို့) သဘက် ဆောင်းပေးထားပါ။
ပြီးရင် ၁ နာရီလောက် ထားပါ။
အဲဒီနောက် ရေနွေးရယ် ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ပေါင်းဆေးရယ် သုံးပြီး ခေါင်းလျှော်ပေးပါ ။
တစ်ခါတည်း လုပ်တာနဲ့တော့ သိပ်သိသာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ် ၁ လပြည့်အောင် လုပ်ပေးပါ။
ဆံပင်တွေ ပျော့ပြောင်းပြီး ဖြောင့်စင်းလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Corn Flour ပြောင်းဖူးကော်မှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း (၃) ဇွန်း
သံပုယိုသီး ၁ လုံး (သို့) သံပုရာသီး ၁ လုံး
သံပုယိုရည်နဲ့ ပြောင်းဖူးကော်မှုန့်ကို ရော လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် အုန်းနို့နဲ့ သံလွင်ဆီကို ရောပါ။ ပြီးရင် စောစောက သံပုယိုရည်နဲ့ ပြောင်းဖူးကော်မှုန့် ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် အိုးတစ်လုံးထဲကိုထည့်ပြီး အပူချိန် အနေတော်နဲ့ ပျစ်ပျစ်လေး ဖြစ်တဲ့ထိ တည်ပါ။ ပျစ်သွားပြီဆိုရင် မီးဖိုပေါ်ကချပြီး အအေးခံလိုက်ပါ ။
ပြီးရင်တော့ ဆံဖျားကနေ အရင်းထိ သေချာ လိမ်းပေးပါ။
ပြီးရင် သဘက်ပူပူ (သို့) Shower Capဆောင်းပြီး ၂ နာရီလောက် ထားထားပါ။
ပြီးရင် ခေါင်းလျှော်ရည် ပေါင်းဆေးသုံးပြီး ခေါင်းလျှော်ချလိုက်ပါ ။ တစ်ပတ် ၂ ကြိမ်လုပ်ပါ။ ၁ လတိတိ ပြုလုပ်ပေးပါနော် ။ ။
ဆံပငျကို သဘာဝအတိုငျး ဖွောငျ့စငျးစမေယျ့ ပေါငျးတငျနညျး …
သဘာဝအတိုငျး ဆံပငျ ဖွောငျ့စငျးစငျးလေးကို မကွိုကျတဲ့ မိနျးကလေး ဘယျမှာရှိမှာလဲ၊
ဒါ့ကွောငျ့လဲ အလှပွငျဆိုငျတှမှော ဆံပငျဖွောငျ့တာ ခတျေစားတာပေါ့နျော။
ဆံပငျ ဖွောငျ့ဖို့အတှကျ ဓါတုပစ်စညျတှေ သုံးတာဟာ ဆံသားကို ပကျြဆီးစပေါတယျ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ သဘာဝနညျးလမျး တဈခုကို မြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျနျော ။
ငှကျပြောသီးမှညျ့ (၂) လုံး
ပြားရညျ စားပှဲတငျဇှနျး (၂) ဇှနျး
ဒိနျခဉျြ စားပှဲတငျဇှနျး (၂) ဇှနျး
သံလှငျဆီ စားပှဲတငျဇှနျး (၂) ဇှနျး
ကွကျဥအကာ (၁) လုံး
ငှကျပြောသီးကို အခှံနှာပွီး ပွဲသှားအောငျ ဖိလိုကျပါ။ ကွိတျလိုကျလို့လညျး ရပါတယျ။
ပွီးရငျ ပြားရညျ ဒိနျခဉျြနဲ့ သံလှငျဆီထညျ့ပါ။
ပွီးရငျ ကွကျဥအကာ ထညျ့ပါ။ သခြော မှပေေးပါ။ နှံ့သှားပွီဆိုရငျ အသုံးပွုလို့ ရပါပွီ ။
ဆံပငျအဖြားကနေ အရငျးထိ သခြောလိမျးပေးပွီး Shower Cap (သို့) သဘကျ ဆောငျးပေးထားပါ။
ပွီးရငျ ၁ နာရီလောကျ ထားပါ။
အဲဒီနောကျ ရနှေေးရယျ ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ ပေါငျးဆေးရယျ သုံးပွီး ခေါငျးလြှျောပေးပါ ။
တဈခါတညျး လုပျတာနဲ့တော့ သိပျသိသာမှာ မဟုတျပါဘူး။ တဈပတျကို ၂ ကွိမျ ၁ လပွညျ့အောငျ လုပျပေးပါ။
ဆံပငျတှေ ပြော့ပွောငျးပွီး ဖွောငျ့စငျးလာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
Corn Flour ပွောငျးဖူးကျောမှုနျ့ စားပှဲတငျဇှနျး (၃) ဇှနျး
အုနျးနို့ ၁ ခှကျ
သံပုယိုသီး ၁ လုံး (သို့) သံပုရာသီး ၁ လုံး
သံပုယိုရညျနဲ့ ပွောငျးဖူးကျောမှုနျ့ကို ရော လိုကျပါ ။
ပွီးရငျ အုနျးနို့နဲ့ သံလှငျဆီကို ရောပါ။ ပွီးရငျ စောစောက သံပုယိုရညျနဲ့ ပွောငျးဖူးကျောမှုနျ့ ထဲကို ထညျ့လိုကျပါ ။
ပွီးရငျ အိုးတဈလုံးထဲကိုထညျ့ပွီး အပူခြိနျ အနတေျောနဲ့ ပဈြပဈြလေး ဖွဈတဲ့ထိ တညျပါ။ ပဈြသှားပွီဆိုရငျ မီးဖိုပျေါကခပြွီး အအေးခံလိုကျပါ ။
ပွီးရငျတော့ ဆံဖြားကနေ အရငျးထိ သခြော လိမျးပေးပါ။
ပွီးရငျ သဘကျပူပူ (သို့) Shower Capဆောငျးပွီး ၂ နာရီလောကျ ထားထားပါ။
ပွီးရငျ ခေါငျးလြှျောရညျ ပေါငျးဆေးသုံးပွီး ခေါငျးလြှျောခလြိုကျပါ ။ တဈပတျ ၂ ကွိမျလုပျပါ။ ၁ လတိတိ ပွုလုပျပေးပါနျော ။ ။
“မကျြခုံးမှေးမရှိတဲ့သူတှအေတှကျ ထူထဲနကျမှောငျလာစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျးမြား”
မျက်ခုံးမွှေး က လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာအလှကို ပိုထင်ရှားစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိ တာကြောင့် မျက်ခုံးမွှေးမလှရင် အလှ အပက မပြည့်စုံဘူးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့ မျက်နှာအလှကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေ ထူထဲလှပ လာအောင် လုပ်လို့ရမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။သဘာဝနည်း လမ်းလေးတွေဖြစ်တာမို့ အသားအရေလည်း
မပျက်စီးစေတာကြောင့် စိတ်ချလက်ချ လိုက်လုပ်နိုင် ပါတယ်နော် ။
ရှားစောင်းလက်ပက်အနှစ်ကို ယူပြီး မျက်ခုံးမွှေးတလျှောက် လိမ်းပေးကာ (၃) မိနစ်လောက် နှိပ်နယ်ပေးရပါမယ် ။ ပြီးရင် မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ထားပြီး ရေအေးနဲ့ပြန်ဆေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ ။
ဒါလေးကို နေ့တိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ထူထဲလှပတဲ့ မျက်ခုံးလေးကို ရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
( ၂ ) Vaseline
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ မျက်ခုံးတလျှောက် Vaseline ကို ပါးပါးလေးလိမ်းပေးပြီး တစ်ညလုံးထားလိုက်ပါ ။ မနက်ရောက်မှ ရေနွေးလေးနဲ့ပြန်ဆေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ညတိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်း မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေထူထဲလှပလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကြက်ဥတစ်လုံးကို ယူပြီး အကာကို ဖယ်ပါ ။ကျန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်ကို ကြေသွားအောင် ခေါက်လိုက်ပြီး ဘရပ်ရ်ှလေးနဲ့ယူကာမျက်ခုံးမွေးတလျှောက် လိမ်းပေးလိုက်ပါ။
မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ထားပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ပြန်ဆေးပေးရပါတယ်။ နေ့တိုင်းဒီလိုလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဆယ်ရက်လောက်ကြာရင် မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေ သိသိသာသာထူလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ ။
(၄) နှမ်းဆီ၊ အုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ
နှမ်းဆီ၊ အုန်းဆီနဲ့သံလွင်ဆီထဲက ကြိုက်ရာ တစ်မျိုးကိုမျက်ခုံးမှာလိမ်းပြီး မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ဖွဖွလေးနှိပ်နယ်ပေးပြီး တစ်ညလုံးထားလိုက်ပါ ။
မနက်ရောက်မှ မျက်နှာသစ်ပေးလိုက်ရုံပါ ။ နှမ်းဆီ၊အုန်းဆီ နဲ့သံလွင်ဆီသုံးမျိုးလုံးက မျက်ခုံးမွှေးတွေကိုထူထဲသန်မာစေလို့ ကြိုက်တဲ့ဆီတစ်မျိုးကို သုံးလို့ရပါတယ်။
ကြက်သွန်နီတစ်ခြမ်းကို ကြေညက်နေအောင်ချေရပါမယ် ။ဘရပ်ရ်ှအသေးလေးနဲ့ တို့ယူပြီး မျက်ခုံးမွေးတလျှောက် လိမ်းပေးလိုက်ပါ ။
တစ်နာရီလောက်ထားပြီးရင် ဂွမ်းစလေးမှာ သံပရိုရည်ဆွတ်ပြီး မျက်ခုံးမွှေးက ကြက်သွန်နီတွေကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါ ဒီနည်းက မျက်ခုံးမွှေးတွေ ထူထဲလာဖို့ တော်တော်လေးထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော် ။
မကျြခုံးမှေး က လူတဈယောကျရဲ့ မကျြနှာအလှကို ပိုထငျရှားစနေိုငျတဲ့ အစှမျးရှိ တာကွောငျ့ မကျြခုံးမှေးမလှရငျ အလှ အပက မပွညျ့စုံဘူးလို့ပွောရမှာပဲဖွဈပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ပြိုမတေို့ မကျြနှာအလှကို ပျေါလှငျထငျရှားစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
မကျြခုံးမှေးလေးတှေ ထူထဲလှပ လာအောငျ လုပျလို့ရမယျ့ သဘာဝနညျးလမျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
သဘာဝနညျး လမျးလေးတှဖွေဈတာမို့ အသားအရလေညျး မပကျြစီးစတောကွောငျ့ စိတျခလြကျခြ လိုကျလုပျနိုငျ ပါတယျနျော ။
ရှားစောငျးလကျပကျအနှဈကို ယူပွီး မကျြခုံးမှေးတလြှောကျ လိမျးပေးကာ (၃) မိနဈလောကျ နှိပျနယျပေးရပါမယျ ။
ပွီးရငျ မိနဈနှဈဆယျလောကျထားပွီး ရအေေးနဲ့ပွနျဆေးပေးလိုကျရုံပါပဲ ။ ဒါလေးကို နတေို့ငျးလုပျပေးမယျဆိုရငျ ထူထဲလှပတဲ့ မကျြခုံးလေးကို ရလာမှာပဲဖွဈပါတယျ
ညအိပျရာဝငျခါနီးမှာ မကျြခုံးတလြှောကျ Vaseline ကို ပါးပါးလေးလိမျးပေးပွီး တဈညလုံးထားလိုကျပါ ။ မနကျရောကျမှ ရနှေေးလေးနဲ့ပွနျဆေးပေးလိုကျရုံပါပဲ။
ညတိုငျးလုပျပေးမယျဆိုရငျ အခြိနျတိုအတှငျး မကျြခုံးမှေးလေးတှထေူထဲလှပလာမှာပဲဖွဈပါတယျ ။
ကွကျဥတဈလုံးကို ယူပွီး အကာကို ဖယျပါ ။ကနျြခဲ့တဲ့ အနှဈကို ကွသှေားအောငျ ခေါကျလိုကျပွီး ဘရပျရျှလေးနဲ့ယူကာမကျြခုံးမှေးတလြှောကျ လိမျးပေးလိုကျပါ။
မိနဈနှဈဆယျလောကျထားပွီး ရနှေေးလေးနဲ့ပွနျဆေးပေးရပါတယျ။ နတေို့ငျးဒီလိုလေးလုပျပေးမယျဆိုရငျ ဆယျရကျလောကျကွာရငျ မကျြခုံးမှေးလေးတှေ သိသိသာသာထူလာတာကိုတှရေ့မှာပါ ။
(၄) နှမျးဆီ၊ အုနျးဆီ၊ သံလှငျဆီ
နှမျးဆီ၊ အုနျးဆီနဲ့သံလှငျဆီထဲက ကွိုကျရာ တဈမြိုးကိုမကျြခုံးမှာလိမျးပွီး မိနဈအနညျးငယျလောကျ ဖှဖှလေးနှိပျနယျပေးပွီး တဈညလုံးထားလိုကျပါ ။
မနကျရောကျမှ မကျြနှာသဈပေးလိုကျရုံပါ ။ နှမျးဆီ၊အုနျးဆီ နဲ့သံလှငျဆီသုံးမြိုးလုံးက မကျြခုံးမှေးတှကေိုထူထဲသနျမာစလေို့ ကွိုကျတဲ့ဆီတဈမြိုးကို သုံးလို့ရပါတယျ။
ကွကျသှနျနီတဈခွမျးကို ကွညေကျနအေောငျခရြေပါမယျ ။ဘရပျရျှအသေးလေးနဲ့ တို့ယူပွီး မကျြခုံးမှေးတလြှောကျ လိမျးပေးလိုကျပါ ။
တဈနာရီလောကျထားပွီးရငျ ဂှမျးစလေးမှာ သံပရိုရညျဆှတျပွီး မကျြခုံးမှေးက ကွကျသှနျနီတှကေို ဖယျရှားပေးလိုကျပါ ဒီနညျးက မကျြခုံးမှေးတှေ ထူထဲလာဖို့ တျောတျောလေးထိရောကျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျနျော ။
“အရေးပျေါ ပေါငျးတငျနညျးအကွောငျး ဝမြှေပေးလိုကျပါပီနျော”
အရေးပေါ် ပေါင်းတင်နည်းအကြောင်း ဝေမျှပေးမယ်…
အလှပြင်ဖို့ အချိန်သီးသန့်လည်း မပေးဖြစ် အပျင်း ကလည်းထူ အစပ်လည်း လျော့မစားနိုင်
ဒါပေမဲ့ အချိန်တန် မှန်ကြည့်တဲ့အခါ မျက်နှာပေါ်က အရေးကြောင်း
အမဲစက် အဖုပိမ့်တွေ ထွက်လာရင် စိတ်အရမ်း ညစ်တတ်တဲ့
ကိုယ့်လို လူမျိုးတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်…
သံပုရာ – အဆီပြန် သက်သာ
(ဆိုးကျိုး အသားပါးလာစေတတ် ဝက်ခြံပေါက်နေသူများ မပြုလုပ်သင့် အရမ်းစပ်စေလို့ပါ)
တကယ်ဆို ဆနွင်းလည်း ပါ ပါသေးတယ်
ဒါပေမဲ့ ခုခေတ် ဆနွင်းစစ်စစ်ဆိုတာ ရှာဝယ်ရခက်လို့
တွေ့ကရာ ဆနွင်းရေ ဖျော်လူးမိပြီး မျက်နှာမှိုစွဲ ခရုသင်း ဖြစ်တာတို့လည်း ကြားသိဖူးတော့
ဆနွင်းအကြောင်း ချန်ထား ပါရစေ ။
ဒု – သခြားသီး
ဓာတ်စုံနေအောင် အာနိသင် ရထားတဲ့ မျက်နှာဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး ရပါလိမ့်မယ်
တစ်ခါလုပ်ရင် အာနိသင်စုံအောင် လေးခု ငါးခုလောက် လုပ်ပေးရင်ရပါပြီ
ခဏခဏ မလုပ်ရပါ တစ်ခါလုပ်ရင် ၂ပတ်လောက်ထိ မှန်ကြည့်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာစေ မှာပါ
သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ မို့ ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေတယ်
ပြီးတော့ ရေများများသောက်ဖို့ ညအိပ်ချိန် မှန်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်
နောက်လည်း ဗဟုသုတလေးတွေ ဝေမျှပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
အရေးပျေါ ပေါငျးတငျနညျးအကွောငျး ဝမြှေပေးမယျ…
အလှပွငျဖို့ အခြိနျသီးသနျ့လညျး မပေးဖွဈ အပငျြး ကလညျးထူ အစပျလညျး လြော့မစားနိုငျ
ဒါပမေဲ့ အခြိနျတနျ မှနျကွညျ့တဲ့အခါ မကျြနှာပျေါက အရေးကွောငျး
အမဲစကျ အဖုပိမျ့တှေ ထှကျလာရငျ စိတျအရမျး ညဈတတျတဲ့
ကိုယျ့လို လူမြိုးတှေ အတှကျ ရညျရှယျပါတယျ…
သံပုရာ – အဆီပွနျ သကျသာ
(ဆိုးကြိုး အသားပါးလာစတေတျ ဝကျခွံပေါကျနသေူမြား မပွုလုပျသငျ့ အရမျးစပျစလေို့ပါ)
တကယျဆို ဆနှငျးလညျး ပါ ပါသေးတယျ
ဒါပမေဲ့ ခုခတျေ ဆနှငျးစဈစဈဆိုတာ ရှာဝယျရခကျလို့
တှကေ့ရာ ဆနှငျးရေ ဖြျောလူးမိပွီး မကျြနှာမှိုစှဲ ခရုသငျး ဖွဈတာတို့လညျး ကွားသိဖူးတော့
ဆနှငျးအကွောငျး ခနျြထား ပါရစေ ။
ဓာတျစုံနအေောငျ အာနိသငျ ရထားတဲ့ မကျြနှာဖွူဖွူဖှေးဖှေးလေး ရပါလိမျ့မယျ
တဈခါလုပျရငျ အာနိသငျစုံအောငျ လေးခု ငါးခုလောကျ လုပျပေးရငျရပါပွီ
ခဏခဏ မလုပျရပါ တဈခါလုပျရငျ ၂ပတျလောကျထိ မှနျကွညျ့တိုငျး စိတျခမျြးသာစေ မှာပါ
သဘာဝပစ်စညျးတှနေဲ့ မို့ ငှကေုနျကွေးကြ သကျသာစတေယျ
ပွီးတော့ ရမြေားမြားသောကျဖို့ ညအိပျခြိနျ မှနျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ
နောကျလညျး ဗဟုသုတလေးတှေ ဝမြှေပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ…
“အစာအိမျနာ အစာအိမျအောငျ့ ရောဂါမြားအတှကျ အရေးပျေါဆေးနညျး”
အစားစားချိန်မမှန်တာ အပူအစပ်နဲ့ အမာတွေကို ဆက်တိုက်စားမိတဲ့အခါ ရုတ်တရက် အစာအိမ်နာတာ အောင့်တာ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ရုတ်တရက် အစာအိမ်အောင့်ခြင်း နာခြင်းများအတွက် ဆေးမလိုပဲ သဘာဝနည်းအတိုင်း အရေးပေါ်ကုသနိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းသလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း နည်းတဲ့နည်းလေးပါ။
ဂျပန် မှာ ရထား စီးတုန်းရင်း အစာအိမ် အောင့်လာလို့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာတော့ ဂျပန် အဖွားကြီးတယောက်က ရပ်တဲ့ ဘူတာ က mini market ထဲခေါ်သွားပြီး ကုသ ပေးလိုက်တဲ့ အရေးပေါ်ဆေးနည်း လေး ပါ။ ဂျပန် လူမျိုး များရဲ့ ရိုးရာ ဆေးနည်း တစ်ခုလို့ သိရပါတယ်။
ဆေးနည်းကတော့ ကြက်ဥ သို့ ဘဲဥ တစ်လုံးကို ပန်းကန်လုံးထဲ ဖောက်ထည့်၊ အနှစ်ကို ဖယ်ထားပြီး အကာထဲကို ဆိုးဆေးမပါတဲ့ သဘာဝ သကြားညို အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်လိုက်ပါ။ အစာအိမ် ကြောင့် ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာ ချက်ချင်းပျောက်ပါတယ်။ အရေးပေါ် ဆေးနည်း လေးပါ။
အစာအိမ်နာတာဟာ နေ့စဉ်ရက်စက်ဖြစ်နေတာမျိုး အမြဲလိုလို အစာအိမ်နာတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာ တက်ရောက်ခါ သေချာကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အစားစားခြိနျမမှနျတာ အပူအစပျနဲ့ အမာတှကေို ဆကျတိုကျစားမိတဲ့အခါ ရုတျတရကျ အစာအိမျနာတာ အောငျ့တာ ဖွဈတတျကွပါတယျ။ အဆိုပါ ရုတျတရကျ အစာအိမျအောငျ့ခွငျး နာခွငျးမြားအတှကျ ဆေးမလိုပဲ သဘာဝနညျးအတိုငျး အရေးပျေါကုသနိုငျပါတယျ။ လှယျကူရိုးရှငျးသလို ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှလေညျး နညျးတဲ့နညျးလေးပါ။
ဂပြနျ မှာ ရထား စီးတုနျးရငျး အစာအိမျ အောငျ့လာလို့ မခံမရပျနိုငျဖွဈလာတော့ ဂပြနျ အဖှားကွီးတယောကျက ရပျတဲ့ ဘူတာ က mini market ထဲချေါသှားပွီး ကုသ ပေးလိုကျတဲ့ အရေးပျေါဆေးနညျး လေး ပါ။ ဂပြနျ လူမြိုး မြားရဲ့ ရိုးရာ ဆေးနညျး တဈခုလို့ သိရပါတယျ။
ဆေးနညျးကတော့ ကွကျဥ သို့ ဘဲဥ တဈလုံးကို ပနျးကနျလုံးထဲ ဖောကျထညျ့၊ အနှဈကို ဖယျထားပွီး အကာထဲကို ဆိုးဆေးမပါတဲ့ သဘာဝ သကွားညို အနညျးငယျထညျ့၍ သောကျလိုကျပါ။ အစာအိမျ ကွောငျ့ ဗိုကျအောငျ့ ဗိုကျနာ ခကျြခငျြးပြောကျပါတယျ။ အရေးပျေါ ဆေးနညျး လေးပါ။
အစာအိမျနာတာဟာ နစေ့ဉျရကျစကျဖွဈနတောမြိုး အမွဲလိုလို အစာအိမျနာတတျတယျဆိုရငျတော့ ဆေးရုံ ဆေးခနျးတှမှော တကျရောကျခါ သခြောကုသဖို့ လိုအပျပါတယျ။
“ဝိတျခနြညျးမြားထဲကမှ နာမညျကွီး လူကွိုကျမြားတဲ့ လှဲလှောငျးကာ အကွောဆနျ့ရငျး ဝိတျခနြညျး”
ဟို ဒိန်ချဉ်ဗူးကြော်ငြာထဲကလိုပေါ့ မျက်နှာလေးက ဘယ်လောက်လှလှ ခါးမှာ အဆီတွေ အတစ်လိုက်တွေ့ရသောအခါ ခရက်ရ်ှလေးက ခါးသွယ်သွယ်နဲ့ ကောင်မလေးနောက် ပါသွားတာ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ တစ်ကယ်လည်း ခါးအဆီတွေက အဝတ်အစား ဝတ်တဲ့အခါ အရမ်းဒုက္ခပေးပါတယ်၊ မတ်တပ်ရပ်လမ်းလျှောက်စဉ် ပြဿနာမဟုတ် ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပေမယ့် ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အရစ်လိုက်အခေါက်လိုက်နဲ့ အတော်ရုပ်ဆိုးပါတယ်။
အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းကတော့ ငွေကြေးလည်းမကုန် လူလည်းအရမ်းမပင်ပန်းပဲနဲ့ တစ်ရက်မှာ ၁၅ မိနစ်လောက် လုပ်ရုံနဲ့ ခါးပတ်လည်က အဆီတွေကို သိသိသာသာ ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းက နယ်နယ်ရရ နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းတွေကို ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာ အစဉ်တစိုက်လေ့လာနေတဲ့ ဂျပန်လူမျိုး ဒေါက်တာ ဖူးကုရှုဒီ ရဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အရိုးအဆစ်ရောဂါတွေကိုပါ သက်သာလျော့ပါးစေပါတယ်။
အဆိုပါ အနေအထားအတိုင်း ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်ခန့် ကြာတဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်သား တောင့်တင်းပူနွေးလာတာကို ခံစားလာရပြီဆိုရင် ဒီနည်းက မှန်ကန်ပြီး အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူပါ။ ဒီအနေအထားအတိုင်း ၅ မိနစ်ခန့်နေပြီးရင် ဘေးစောင်းလှဲချပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ထပါ။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ ၃ ကြိမ် မှန်မှန် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဗိုက်ခေါက်အဆီကျလာတာကို ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းကို ကလေးမွေးပြီးကာစ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချလိုတဲ့ မိခင်တွေလည်း လိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ ဖော်ပြပါလေ့ကျင့်ခန်းကို ကျောရိုးပြဿနာရှိသူများ၊ အရိုးအဆစ်ရောင်ယမ်းနာ ရှိသူများအနေနဲ့ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှသာ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် ပထမ တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်မှာ နေမထိထိုင်မသာ အဆင်မပြေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ခဏရပ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လုပ်ကြည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့် နေနိုင်လာသည်ထိ အချိန်တဖြည်းဖြည်း မြှင့်၍ လေ့ကျင့်သွားပါ။
ဖော်ပြပါ လေ့ကျင့်ခန်းကို လိုက်လုပ်ကြသူတွေများစွာရှိပြီး လူအတော်များများက လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ခါးအဆီတွေ ၂ စင်တီမီတာလောက် ပြုတ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါ ခါးအဆီဘယ်လောက် လျော့ကျသွားလည်းဆိုတာ ပြန်လည် ဝေမျှပေးပါဦးနော်။
ဟို ဒိနျခဉျြဗူးကွျောငွာထဲကလိုပေါ့ မကျြနှာလေးက ဘယျလောကျလှလှ ခါးမှာ အဆီတှေ အတဈလိုကျတှရေ့သောအခါ ခရကျရျှလေးက ခါးသှယျသှယျနဲ့ ကောငျမလေးနောကျ ပါသှားတာ ကွညျ့ဖူးကွမှာပါ။ တဈကယျလညျး ခါးအဆီတှကေ အဝတျအစား ဝတျတဲ့အခါ အရမျးဒုက်ခပေးပါတယျ၊ မတျတပျရပျလမျးလြှောကျစဉျ ပွဿနာမဟုတျ ဖုံးကှယျထားနိုငျပမေယျ့ ထိုငျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ အရဈလိုကျအခေါကျလိုကျနဲ့ အတျောရုပျဆိုးပါတယျ။
အခုဖျောပွမယျ့ နညျးလမျးကတော့ ငှကွေေးလညျးမကုနျ လူလညျးအရမျးမပငျပနျးပဲနဲ့ တဈရကျမှာ ၁၅ မိနဈလောကျ လုပျရုံနဲ့ ခါးပတျလညျက အဆီတှကေို သိသိသာသာ ပြောကျကှယျသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒီနညျးက နယျနယျရရ နညျးလမျးတော့မဟုတျပါဘူး ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခနြိုငျဖို့ လကေ့ငျြ့ခနျးနညျးတှကေို ၁၀ နှဈကြျောကွာ အစဉျတစိုကျလလေ့ာနတေဲ့ ဂပြနျလူမြိုး ဒေါကျတာ ဖူးကုရှုဒီ ရဲ့ နညျးလမျးဖွဈပွီး အရိုးအဆဈရောဂါတှကေိုပါ သကျသာလြော့ပါးစပေါတယျ။
အဆိုပါ အနအေထားအတိုငျး ငွိမျငွိမျထားပွီး တဈမိနဈ နှဈမိနဈခနျ့ ကွာတဲ့အခါ ဝမျးဗိုကျသား တောငျ့တငျးပူနှေးလာတာကို ခံစားလာရပွီဆိုရငျ ဒီနညျးက မှနျကနျပွီး အလုပျဖွဈတယျလို့ မှတျယူပါ။ ဒီအနအေထားအတိုငျး ၅ မိနဈခနျ့နပွေီးရငျ ဘေးစောငျးလှဲခပြွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပွနျထပါ။ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈနေ့ ၃ ကွိမျ မှနျမှနျ လုပျနိုငျမယျဆိုရငျ မွနျမွနျဆနျဆနျ ဗိုကျခေါကျအဆီကလြာတာကို ကိုယျတိုငျလကျတှေ့ ခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီနညျးကို ကလေးမှေးပွီးကာစ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျ လြော့ခလြိုတဲ့ မိခငျတှလေညျး လိုကျလုပျနိုငျပါတယျ။ မှတျခကျြ။ ။ ဖျောပွပါလကေ့ငျြ့ခနျးကို ကြောရိုးပွဿနာရှိသူမြား၊ အရိုးအဆဈရောငျယမျးနာ ရှိသူမြားအနနေဲ့ တတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီးမှသာ လုပျဆောငျကွဖို့ တိုကျတှနျးပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနစေဉျ ပထမ တဈမိနဈ နှဈမိနဈမှာ နမေထိထိုငျမသာ အဆငျမပွဖွေဈလာတတျပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈလာရငျ ခဏရပျလိုကျပါ။ နောကျတဈကွိမျ ပွနျလုပျကွညျ့ပွီး ၅ မိနဈခနျ့ နနေိုငျလာသညျထိ အခြိနျတဖွညျးဖွညျး မွှငျ့၍ လကေ့ငျြ့သှားပါ။
ဖျောပွပါ လကေ့ငျြ့ခနျးကို လိုကျလုပျကွသူတှမြေားစှာရှိပွီး လူအတျောမြားမြားက လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပွီး သိပျမကွာခငျမှာ ခါးအဆီတှေ ၂ စငျတီမီတာလောကျ ပွုတျသှားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ လကေ့ငျြ့ပွီးတဲ့အခါ ခါးအဆီဘယျလောကျ လြော့ကသြှားလညျးဆိုတာ ပွနျလညျ ဝမြှေပေးပါဦးနျော။
“မကျြနှာကို ရခေဲနှငျ့ပှတျရငျ ရရှိနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူး (၆)ခကျြ”
မျက်နှာကို ရေခဲနှင့်ပွတ်ရင် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူး (၆)ချက် …
မျက်နှာကို ကုသပုံ ကုသနည်း အမျိုးမျိုး ရှိသည် အနက်မှ
ဒီတစ်ခါ မှာတော့ ရေခဲဖြင့်ကုသနည်းလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနည်းလေးဟာ လူတိုင်းလည်းအလွယ်တကူ လုပ်နိုင်ပြီး
အချိန်နှင့် ငွေလည်း များစွာ မကုန်စေတဲ့နည်းလေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်တာ ကတော့ ရေခဲတုံးပင် ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အသားအရည်ကို ကြည်လင်စေနိုင်ပါတယ်
ရေခဲတုံးဖြင့် မျက်နှာကို ပွတ်တိုက်ပေးခြင်း အားဖြင့်
သွေးလည်ပတ်မူကို အထောက် အကူပြုစေမှာ ဖြစ်ပြီး
မျက်နှာကို သိသိသာသာ ကြည်လင် လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မျက်နှာပေါ်မှ အရာများကို ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း
မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အမည်းစက်များ၊
ဝက်ခြံများ သာမကဘဲ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်
မျက်နှာ နီမြန်းခြင်းကို သက်သာစေနိုင် ပါတယ်။
(၃) မျက်လုံးအောက်က အရေအကြောင်းများကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်
ညဘက်မအိပ်ခင်မှာ သခွားသီးဖြင့် ရောစပ်ကာ
အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မျက်လုံးအောက်မှအရေး အကြောင်းများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
(၄) Toner အဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
မိတ်ကပ်များ မလိမ်းခင် မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့
အညစ် အကြေးများကို သန့်စင်စေရန် ရေခဲတုံးကို
Toner အဖြင့်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့ အချိန် မရှိဘူး ဆိုရင်
ရေခဲတုံးကို အဝတ်စဖြင့် ပတ်ပြီး မျက်နှာ တစ်ခုလုံး
ပွတ်တိုက်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါ မျက်နှာဟာ ကြည်လင်
လာပြီး သဘာဝမျက်နှာ ပုံစံဖြင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
(၆) ပါးရေနားရေတွန့်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
နောက်ဆုံး အချက်ကတော့ ရေခဲတုံးဟာ
ပါးရေနားရေတွန့်ခြင်းနှင့် မျက်နှာအရေး အကြောင်းများကို
ကာ ကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အတွက်ကြောင့်
ရေခဲတုံးကိုမျက်နှာ အသားအရည် အတွက်
မရှိမဖြစ် အသုံးပြု နိုင်ရန် တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
မျက်နှာကို ရေခဲနှင့်ပွတ်ရင် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူး ၆ ချက်
ဒီတစ်ခါ မှာတော့ ရေခဲဖြင့်ကုသနည်းလေးကို
တင်ပြေ ပး လိုက်ပါတယ်။
အချိန်နှင့် ငွေလည်း များစွာ မကုန်စေတဲ့
မကျြနှာကို ရခေဲနှငျ့ပှတျရငျ ရရှိနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူး (၆)ခကျြ …
မကျြနှာကို ကုသပုံ ကုသနညျး အမြိုးမြိုး ရှိသညျ အနကျမှ
ဒီတဈခါ မှာတော့ ရခေဲဖွငျ့ကုသနညျးလေးကိုတငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီနညျးလေးဟာ လူတိုငျးလညျးအလှယျတကူ လုပျနိုငျပွီး
အခြိနျနှငျ့ ငှလေညျး မြားစှာ မကုနျစတေဲ့နညျးလေးပငျဖွဈပါတယျ။
လိုအပျတာ ကတော့ ရခေဲတုံးပငျ ဖွဈပါတယျ။
(၁) အသားအရညျကို ကွညျလငျစနေိုငျပါတယျ
ရခေဲတုံးဖွငျ့ မကျြနှာကို ပှတျတိုကျပေးခွငျး အားဖွငျ့
သှေးလညျပတျမူကို အထောကျ အကူပွုစမှော ဖွဈပွီး
မကျြနှာကို သိသိသာသာ ကွညျလငျ လာစမှော ဖွဈပါတယျ။
(၂) မကျြနှာပျေါမှ အရာမြားကို ဖယျရှားနိုငျခွငျး
မကျြနှာပျေါမှာ ရှိတဲ့ အမညျးစကျမြား၊
ဝကျခွံမြား သာမကဘဲ ရောငျရမျးခွငျးနှငျ့
မကျြနှာ နီမွနျးခွငျးကို သကျသာစနေိုငျ ပါတယျ။
(၃) မကျြလုံးအောကျက အရအေကွောငျးမြားကို ကုသပေးနိုငျပါတယျ
ညဘကျမအိပျခငျမှာ သခှားသီးဖွငျ့ ရောစပျကာ
အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ မကျြလုံးအောကျမှအရေး အကွောငျးမြားကို ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
(၄) Toner အဖွငျ့လညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ
မိတျကပျမြား မလိမျးခငျ မကျြနှာပျေါမှာရှိတဲ့
အညဈ အကွေးမြားကို သနျ့စငျစရေနျ ရခေဲတုံးကို
Toner အဖွငျ့လညျး သုံးနိုငျပါတယျ။
အကယျ၍ မိတျကပျလိမျးဖို့ အခြိနျ မရှိဘူး ဆိုရငျ
ရခေဲတုံးကို အဝတျစဖွငျ့ ပတျပွီး မကျြနှာ တဈခုလုံး
ပှတျတိုကျနိုငျပါတယျ။ ထိုအခါ မကျြနှာဟာ ကွညျလငျ
လာပွီး သဘာဝမကျြနှာ ပုံစံဖွငျ့သှားနိုငျပါတယျ။
(၆) ပါးရနေားရတှေနျ့ခွငျးကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ
နောကျဆုံး အခကျြကတော့ ရခေဲတုံးဟာ
ပါးရနေားရတှေနျ့ခွငျးနှငျ့ မကျြနှာအရေး အကွောငျးမြားကို
ကာ ကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ အဲဒီ အတှကျကွောငျ့
ရခေဲတုံးကိုမကျြနှာ အသားအရညျ အတှကျ
မရှိမဖွဈ အသုံးပွု နိုငျရနျ တငျပွပေး လိုကျပါတယျ။
မကျြနှာကို ရခေဲနှငျ့ပှတျရငျ ရရှိနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူး ၆ ခကျြ
ဒီတဈခါ မှာတော့ ရခေဲဖွငျ့ကုသနညျးလေးကို
တငျပွေ ပး လိုကျပါတယျ။
အခြိနျနှငျ့ ငှလေညျး မြားစှာ မကုနျစတေဲ့
ဓါတုပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး အသားဖြူအောင်လုပ်မှာ ထက်စာရင်တော့
သဘာဝနည်းကို သုံးပြီး ကြိုးစားကြည့်တာက ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။
အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်း ကလည်း တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါ။
ရှားစောင်းလက် ပတ်ကို အသားဖြူဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့…..
ပြီးရင်တော့ မျက်နှာမှာ လူးပေးပြီး(၁၀)မိနစ်ကြာအောင် ထားပေးပါ။ (၁၀)မိနစ်လောက် ပြည့်ရင်တော့ ရေအေးနဲ့ဆေးချပါ။
ဒီနည်းကို တစ်ရက်မှာ နှစ်ကြိမ်လောက်၊အချိန်မရဘူးဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး တစ်ပတ်မှာ ငါးကြိမေ် လာက်တော့ လုပ်ပေးပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျဲလ်၊နနွင်းနဲ့ပျားရည်တို့ကို ပျစ်နေအောင် ရောပါ။
ပျစ်နေအောင် ရောနယ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။မိနစ်(၂၀)လောက် ထားပြီး ရေကြက်သီးနွေးနဲ့ ဆေးချပါ။
ဒီနည်းကိုတော့ တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်၊သုံးကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
(၃) ရှားစောင်းလက်ပတ် နဲ့ သံပရို
ရှားစောင်းလက်ပတ်ထဲက ဂျဲလ်ကို ခြစ်ယူပါ။ပြီးရင်တော့ သံပရို သီး(၂)လုံးကို အရည်ညှစ်ပြီး၊ရောပါ။
သေချာနှံ့အောင်နယ်ပြီး (၁၅)မိနစ်လောက် ကြာအောင် လိမ်းပေးပါ။ပြီးရင်တော့ ရေနဲ့ဆေးချပါ။နေ့စဉ်ပုံမှန် ပြုလုပ်ပေးပါ။
သခွားသီးကလည်း အသားအရေကို တောက်ပစေသလို ရှားစောင်းလက်ပတ် ကလည်း အသားအရေကို ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ရောကြိတ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။
သခွားသီးမဟုတ်ပဲ ဒိန်ချဉ်နဲ့ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျဲလ်ကို ရောလိမ်း လို့လည်း ရပါတယ် ။
နာရီဝက်လောက် လိမ်းထားပေးပြီးရင်တော့ ရေအေးနဲ့ ဆေးချပေးပါ။တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်၊သုံးကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
ရှားစောင်း လက်ပတ် ဂျဲလ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ဗီတာမင်အီး ဇွန်းဝက်ကို ရောပြီး လိမ်းပေးပါ။
ဓါတုပစ်စညျးတှကေို သုံးပွီး အသားဖွူအောငျလုပျမှာ ထကျစာရငျတော့
သဘာဝနညျးကို သုံးပွီး ကွိုးစားကွညျ့တာက ပိုပွီးတော့ အန်တရာယျကငျးပါတယျ။
အသုံးပွုရမယျ့ ပစ်စညျး ကလညျး တခွားမဟုတျပါဘူး။ ရှားစောငျးလကျပတျပါ။
ရှားစောငျးလကျ ပတျကို အသားဖွူဖို့အတှကျ ဘယျလိုမြိုး အသုံးပွုရမလဲဆိုတော့…..
ပွီးရငျတော့ မကျြနှာမှာ လူးပေးပွီး(၁၀)မိနဈကွာအောငျ ထားပေးပါ။ (၁၀)မိနဈလောကျ ပွညျ့ရငျတော့ ရအေေးနဲ့ဆေးခပြါ။
ဒီနညျးကို တဈရကျမှာ နှဈကွိမျလောကျ၊အခြိနျမရဘူးဆိုရငျလညျး အနညျးဆုံး တဈပတျမှာ ငါးကွိမျေ လာကျတော့ လုပျပေးပါ။
ရှားစောငျးလကျပတျဂြဲလျ၊နနှငျးနဲ့ပြားရညျတို့ကို ပဈြနအေောငျ ရောပါ။
ပဈြနအေောငျ ရောနယျပွီး လိမျးပေးပါ။မိနဈ(၂၀)လောကျ ထားပွီး ရကွေကျသီးနှေးနဲ့ ဆေးခပြါ။
ဒီနညျးကိုတော့ တဈပတျမှာ နှဈကွိမျ၊သုံးကွိမျလောကျ လုပျပေးပါ။
(၃) ရှားစောငျးလကျပတျ နဲ့ သံပရို
သခှားသီးကလညျး အသားအရကေို တောကျပစသေလို ရှားစောငျးလကျပတျ ကလညျး အသားအရကေို ရဓေါတျဖွညျ့တငျးပေးနိုငျပါတယျ။ရောကွိတျပွီး လိမျးပေးပါ။
သခှားသီးမဟုတျပဲ ဒိနျခဉျြနဲ့ရှားစောငျးလကျပတျဂြဲလျကို ရောလိမျး လို့လညျး ရပါတယျ ။
ရှားစောငျး လကျပတျ ဂြဲလျလကျဖကျရညျဇှနျးတဈဇှနျး၊ ဗီတာမငျအီး ဇှနျးဝကျကို ရောပွီး လိမျးပေးပါ။
“လညျပငျးကွီးရောဂါ သကျသာစသေညျ့ မွနျမာဆေးမွီးတို”
လည်ပင်းကြီးရောဂါ သက်သာစေသည့် မြန်မာဆေးမြီးတို
တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာ ၅ နှစ် ရှိပြီဟု ပြောပါသည်။ မန္တလေးမြို့ စိန်ပန်းရပ်မှ ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဆေးလည်း နေ့စဉ် စားနေပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားဖြစ်၍ စစ်ကိုင်း သီတဂူဆေးရုံသို့ သွားပြသည်။ ပေးသည့်ဆေးကို နေ့စဉ်တစ်ကြိမ် စားရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဆေးကလည်း ဈေးမကြီးပါ။ စားခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်။ သိပ်လည်းမထူးခြား အနည်းငယ် ပိုကြီးလာသည် ထင်သည်ဟု ဆိုသည်။
အဘယ့်ကြောင့် တိုင်းရင်းဆေးခန်း လာပြရသလဲ မေးကြည့်သောအခါ ဆရာ့ဆေးခန်းက ဆေးနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့လို့ဟုပြောသည်။ ဆရာက လည်ပင်းကြီး မကုဖူးပါဟု ပြောသည်။ ပျောက်သူအဒေါ်ကြီးက ကိုယ်တိုင်ပြောသည်။ စစ်ကိုင်းနယ်ဖက်မှ ဖြစ်သည်။ ဒူးနာ၍ မန္တလေး ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတွင် တည်းကုရန် အမျိုးဘုန်းကြီးက ခေါ်ကုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆရာ့ထံတွင် ကုသရင်း ရောဂါမှာ ဒူးနာဖြစ်သော်လည်း တောရွာများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ကုသလေ့မရှိကြသော လည်ပင်းကြီး ဖြစ်နေသည်ကို ဆရာကတွေ့သဖြင့် ပျောက်လိုပျောက်ငြား လိမ်းကြည့်ပါဟု ဆေးမြစ်ကလေး ပေးလိုက်ပါသည်။
ကျားမနိုင် ဆေးမြစ်ဟုခေါ်ပါသည်။ လည်ပင်းတွင်လိမ်းရာ သက်သာပြီး အသက်ရှူကောင်းလာသဖြင့် ရေရှည်နေ့စဉ် လိမ်းပါသည်။ ရွှေစာရံဘုရားပွဲတွင် ဆရာပေးလိုက်သည့် ဆေးမြစ်မျိုး ရောင်းသည်ကို တွေ့သဖြင့် များများဝယ်ထားပြီး ဆက်လိမ်းပါသည်။ အကုန်အစင် ပျောက်သွားပြီဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း သူ့လည်ပင်းမှာ ကြည့်ပျော်ရှုပျော် အနေအထားသို့ ရောက်လာကြောင်း ပြောပြ၍ လာပြသည်ဟု ပြောပါသည်။
ကျားမနိုင်သည် နွယ်ပင်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထက်ပိုင်းဖြတ်လိုက်သောအခါ ထိပ်တွင် ကျားခြေရာကဲ့သို့ ပုံပါသဖြင့် ကျားမနိုင် ဆေးနွယ်မြစ်ဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေစာရံဘုရားပွဲတွင် တောထွက် တောင်ထွက် ဆေးပင် ဆေးမြစ် ရောင်းချသူများက ရိုးရာဆေးအသုံးအဖြစ် မျက်စိနာလျှင် သွေးကွင်းနိုင်သည်။ ဝက်ခြံဖုများ ပျောက်သည်။ အပူဖု အကျိတ်များ ကြေသည်။ အအေး ဆေးမြစ်ဖြစ်သည် အပူမလောင်ပါ။ အရောင်ကျစေသည် သက်တံ့နာကိုပင် နိုင်သည်။ အပြင်ထွက်သည့် လိပ်ခေါင်းကိုပင် သွေးလိမ်းလျှင် ပျောက်သည်ဟု ပြောရောင်းကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အနောက်တိုင်းဆေးနှင့်ပင် တစ်သက်လုံး ဆေးစားရမည့် လည်ပင်းကြီး ရောဂါအတွက် တန်ဘိုးမကြီးသော ရိုးရာ ဆေးနည်းတိုဖြင့် မပျောက်သည့်တိုင် သက်သာပြီး ကြည့်ပျော်ရှုပျော် ဖြစ်သွားသည်ဆိုလျှင် တင်ပြရသည့်အတွက် ကုသိုလ်ရမည် ထင်ပါသည်။
လညျပငျးကွီးရောဂါ သကျသာစသေညျ့ မွနျမာဆေးမွီးတို
အဘယျ့ကွောငျ့ တိုငျးရငျးဆေးခနျး လာပွရသလဲ မေးကွညျ့သောအခါ ဆရာ့ဆေးခနျးက ဆေးနဲ့ပြောကျသှားတဲ့ အဒျေါကွီး တဈယောကျနဲ့ တှခေဲ့လို့ဟုပွောသညျ။ ဆရာက လညျပငျးကွီး မကုဖူးပါဟု ပွောသညျ။ ပြောကျသူအဒျေါကွီးက ကိုယျတိုငျပွောသညျ။ စဈကိုငျးနယျဖကျမှ ဖွဈသညျ။ ဒူးနာ၍ မန်တလေး ဘုနျးကွီးကြောငျး တဈကြောငျးတှငျ တညျးကုရနျ အမြိုးဘုနျးကွီးက ချေါကုပေးခွငျး ဖွဈသညျ။
ရှစောရံဘုရားပှဲတှငျ တောထှကျ တောငျထှကျ ဆေးပငျ ဆေးမွဈ ရောငျးခသြူမြားက ရိုးရာဆေးအသုံးအဖွဈ မကျြစိနာလြှငျ သှေးကှငျးနိုငျသညျ။ ဝကျခွံဖုမြား ပြောကျသညျ။ အပူဖု အကြိတျမြား ကွသေညျ။ အအေး ဆေးမွဈဖွဈသညျ အပူမလောငျပါ။ အရောငျကစြသေညျ သကျတံ့နာကိုပငျ နိုငျသညျ။ အပွငျထှကျသညျ့ လိပျခေါငျးကိုပငျ သှေးလိမျးလြှငျ ပြောကျသညျဟု ပွောရောငျးကွသညျကို တှရေ့ပါသညျ။
“လေ ဖွ တျ တော့ မယျ ဆို တာ ကွိုသိနိုငျမယျ့အခကျြမြားနှငျ့ ကာ ကှ ယျ ပုံ န ညျး လ မျးမြား”
လေဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ.?လေဖြတ်ခြင်းကို (၁)ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ခြင်း (၂)ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းဆိုပြီး ဆေးပညာအရ၂မျိူခွဲထားပါတယ်။စစ်တမ်းများအရ လေဖြတ်ခြင်းရဲ့၈၀ရာနှုန်းက ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းဟာအဖြစ်များသလောက် အစပိုင်းတွင်ရောဂါ လက္ခဏာမပြသတာကြောင့် သိရှိဖို့လဲ ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဦနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောလေဖြတ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းမှာ ဦးနှောက်ဆီသို့ သွေးစီးဆင်းသောသွေးကြောတစ်နေရာတွင် သွေးခဲဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါပိတ်ဆို့သွားသောသွေးကြောနေရာရှိ ဦးနှောက်တစ်ရှူးမှာ တဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာပြီး ဦးခေါင်းခွံအတွင်းတွင် ပိုမိုနေရာယူလာရာမှ ဦးနှောက်အတွင်းသားဖိအားမြင့်တက်လာပါတယ်။
ထိုအခါ အလွန်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ဦးနောက်တစ်ခုလုံးမှာဖိအားကိုခံစားလာရပါတယ်။ လေဖြတ်စဉ်မှာ ထိုလူရဲ့ ခြေ လက်များ လှူပ်မရနိုင်သလို သူ့ရဲ့စကားပြောအာရုံနဲ့ အကြားအာရုံတွေပါအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
တစ်ချိူ့သောလေဖြတ်ခြင်းတွေမှာဆို လူနာအနေနဲ့ ထင်ယောင်ထငိမှားတွေပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အချိူ့သော လေဖြတ်ခြင်းအနုစားတွေမှာ လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်ခန့် သို့မဟုတ် မနေ့က အဖြစ်အပျက်များကိုပါ မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးလာပါက လူတစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်ရှားလို့မရတော့ပါ၊
ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ် လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ – မျက်နှာ သို့ ခြေ လက်များ ရုတ်တရက်ထုံခြင်း၊အားနည်းခြင်း (များသောအားဖြင့် ကိုယ်တခြမ်းတည်း)စကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း သို့ ပြောသည်ကိုနားမလည်ခြင်းအမြင်အာရုံအားနည်းခြင်းမူးဝေခြင်း၊လမ်းမလျှောက်နိုင်ခြင်း၊အာရုံစိုက်မရခြင်းရုတ်တရက် အလွန်အမင်းခေါင်းကိုက်ခြင်း –
အောက်ပါလက္ခဏာများရှိပါကလဲ ဆရာဝန်ထံ အမြန်သွားပြဖို့လိုပါတယ်။မူးဝေရာမှအော့အန်ခြင်းဦးခေါင်းအနောက်ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းအန်ခြင်းမျက်လုံးများညိုမည်းခြင်းတစ်နေရာတည်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်နေခြင်း(ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ)သင့်အနီးက လူတစ်ယောက် လေဖြတ်နေပြီဟု သံသယရှိပါက သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း.?
Credit – Dr Jue ( XYZ NEWS )
လဖွေတျခွငျးကို ဘယျလိုသိနိုငျမှာလဲ.?လဖွေတျခွငျးကို (၁)ဦးနှောကျသှေးကွောပေါကျခွငျး (၂)ဦးနှောကျသှေးကွောပိတျခွငျးဆိုပွီး ဆေးပညာအရ၂မြိူခှဲထားပါတယျ။စဈတမျးမြားအရ လဖွေတျခွငျးရဲ့၈၀ရာနှုနျးက ဦးနှောကျသှေးကွောပိတျဆို့ခွငျးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။သှေးကွောပိတျဆို့ခွငျးကွောငျ့လဖွေတျခွငျးဟာအဖွဈမြားသလောကျ အစပိုငျးတှငျရောဂါ လက်ခဏာမပွသတာကွောငျ့ သိရှိဖို့လဲ ခဲယဉျးပါတယျ။
ထိုအခါ အလှနျခေါငျးကိုကျခွငျးဖွဈပျေါလာပါတယျ။ ထို့နောကျမှာတော့ဦးနောကျတဈခုလုံးမှာဖိအားကိုခံစားလာရပါတယျ။ လဖွေတျစဉျမှာ ထိုလူရဲ့ ခွေ လကျမြား လှူပျမရနိုငျသလို သူ့ရဲ့စကားပွောအာရုံနဲ့ အကွားအာရုံတှပေါအလုပျမလုပျနိုငျတော့ပါဘူး။
တဈခြိူ့သောလဖွေတျခွငျးတှမှောဆို လူနာအနနေဲ့ ထငျယောငျထငိမှားတှပေါဖွဈလာတတျပါတယျ။အခြိူ့သော လဖွေတျခွငျးအနုစားတှမှော လှနျခဲ့သော ၁၀နှဈခနျ့ သို့မဟုတျ မနကေ့ အဖွဈအပကျြမြားကိုပါ မသှေ့ားတတျပါတယျ။ ပိုဆိုးလာပါက လူတဈကိုယျလုံး လှုပျရှားလို့မရတော့ပါ၊
ဦးနှောကျသှေးကွောပိတျ လဖွေတျခွငျးရဲ့ လက်ခဏာမြား – မကျြနှာ သို့ ခွေ လကျမြား ရုတျတရကျထုံခွငျး၊အားနညျးခွငျး (မြားသောအားဖွငျ့ ကိုယျတခွမျးတညျး)စကားမပွောနိုငျတော့ခွငျး သို့ ပွောသညျကိုနားမလညျခွငျးအမွငျအာရုံအားနညျးခွငျးမူးဝခွေငျး၊လမျးမလြှောကျနိုငျခွငျး၊အာရုံစိုကျမရခွငျးရုတျတရကျ အလှနျအမငျးခေါငျးကိုကျခွငျး –
အောကျပါလက်ခဏာမြားရှိပါကလဲ ဆရာဝနျထံ အမွနျသှားပွဖို့လိုပါတယျ။မူးဝရောမှအော့အနျခွငျးဦးခေါငျးအနောကျကွှကျသားနာကငျြခွငျးအနျခွငျးမကျြလုံးမြားညိုမညျးခွငျးတဈနရောတညျးကိုအခြိနျကွာမွငျ့စှာကွညျ့နခွေငျး(ရညျရှယျခကျြမရှိပဲ)သငျ့အနီးက လူတဈယောကျ လဖွေတျနပွေီဟု သံသယရှိပါက သငျဘာလုပျသငျ့သနညျး.?